I-Apple ivula iakhawunti ye-Twitter ukukhuthaza iApple News | IPhone iindaba
UApple uvula enye iakhawunti kwi-Twitter, ngeli xesha ukukhuthaza iApple News
I-Apple iyaqhubeka nokukhulisa ubukho bayo kwimidiya yoluntu. Ukucacisa ngakumbi, kuvule ifayile ye- akhawunti entsha ye-Twitter ukukhuthaza usetyenziso lweendaba ezivezwe yinkampani yeapile nge-iOS 9 eWWDC 2015. Kwiakhawunti entsha, enegama @AppleNews, kunjalo ukuthumela i-tweeting Yintoni enokuba lunomdla kupapasho kunye neendaba zokufundwa kakhulu kwi Apple News kwinto ebonakala ngathi lilinge lokusikhuthaza ukuba sisebenzise usetyenziso lwakho.
Umxholo ukhethwa liqela lokuhlela lase-Apple laseMelika, njengoko basixelele okokuqala weposi (unayo ngezantsi). Njengesiqhelo, inkampani eqhuba uTim Cook inayo ungumnikazi we-akhawunti iinyanga, kodwa khange ndipapashe kwanto kude kube izolo. Into abaqhele ukuyenza kwezi meko kukubhalisa iakhawunti ukuze ingabanjwa ngomnye umsebenzisi kwaye ngale ndlela ikwazi ukugcina igama elilula ukulikhumbula.
Iindaba zeApple ziza kwi-Twitter
Silandele apha ngamabali aphezulu kunye nokufundwa okuhle kubapapashi bakho obathandayo, bekhethwe ngabahleli bethu baseMelika. pic.twitter.com/eLyGKZHVMl
-Iindaba ze-Apple (@AppleNews) Aprili 5, 2016
Silandele apha ngamabali abalulekileyo kunye nokufundwa okuhle kupapasho lwakho oluthandayo, olukhethwe ngabahleli bethu baseMelika.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, amakhonkco kwiindaba asebenzise ifomathi yeendaba yeApple, eyi "apple.co/XXXX". Ingabonakala njengenkcukacha ezingabalulekanga kodwa, ukuba singena kwikhonkco kwisixhobo se-iOS apho usetyenziso lufumaneka khona, luya kuvula iindaba kwiApple News. Le yindlela yokusifaka kwisicelo kwaye, ukuba siyayithanda into esiyibonayo, kunokwenzeka ukuba sithathe isigqibo sokuyisebenzisa njengesicelo seendaba esingagqibekanga. Ingxaki kukuba isicelo ifumaneka kuphela eMelikaKe ngoko, nokuba siyafuna, abasebenzisi abavela kwamanye amazwe abasenako ukuyisebenzisa.
Kwelinye icala, kwaye njengakwezinye iinkonzo zokunciphisa i-URL, ukuba sifikelela amakhonkco kwezinye izixhobo, iya kwandisa nje idilesi kwaye ifikelele kwiindaba. Umbuzo ngulo, ngaba le akhawunti intsha iya kubanceda abasebenzisi ukuba basebenzise iApple News njengesicelo seendaba esingagqibekanga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » UApple uvula enye iakhawunti kwi-Twitter, ngeli xesha ukukhuthaza iApple News
Ngomso ungadlala iPlayStation 4 kwi-Mac yakho
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 9.2.1, ishiya i-iOS 9.3.1 kunye ne-iOS 9.3 njengokhetho kuphela